စိန်ဖရန်းစစ် (ခရစ် ၁၁၈၂-၁၂၂၆)
စိန်ဖရန်စစ်သည် ဖရန်စစ္စကန်ခေါ် ခရစ်ယန်ဘုန်းကြီး ဂိုဏ်းကို တည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဂျိုဗန္နီးဗေ နားဒိုးနေဖြစ်၏။ အီတလီပြည် အဆီဇီမြို့သားဖြစ်၍ အဆီဇီမြို့မှ ဖရန်းစစ်ဟူ၍ လည်းတွင်၏။ မိဘများမှာ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူ များဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်က လူချမ်းသာသားပီပီ လှပစွာဝတ်စား ဆင်ယင်၍၊ ပျော်မှုရွင်မှုများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်ခဲ့သော်လည်း၊ အသက် ၂ဝ အရွယ်ခန့်တွင် အသည်းအသန် နာမကျန်းပြီး နောက် တစ်ဖြည်းဖြည်း သတိသံဝေဂရလာသည်။ ထို့နောက် တွင်ကား ဖရန်းစစ်သည် လောကီစည်းစိမ်ကို စွန့်လွှတ်ပြီးလျှင် သူ၏ တစ်သက်ကာလပတ်လုံး ခရစ်တော်၏တရားကို ကျင့်သုံး ကာ ဆင်းရဲသားများ၏ အကျိုးစီးပွားသက်သက်ကိုသာ ဆောင် ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်။
မိမိ၏ ဥစ္စာပစ္စည်းများကိုရောင်း၍ ဆင်းရဲသားနှင့် ဒုက္ခိတ များအား ရက်ရောစွာပေးကမ်းစွန့်ကြဲသဖြင့်၊ ဖခင်ဖြစ်သူက အမျက်ထွက်ပြီးလျှင် ဖရန်းစစ်အား အမွေဖြတ်လိုက်လေသည်။ သို့ရာတွင် ဖရန်းစစ်သည် မည်သို့မျှ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း မရှိဘဲ၊ အဝတ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုနှင့် ထွက်လာခဲ့၍ တော ထဲ၌ ဆင်းရဲငြိုငြင်စွာ နေထိုင်လျက်၊ ခရစ်တော်၏တရားများကို ကျင့်သုံးနေလေသည်။ အကြာမီ သူ့ကိုကြည်ညိုသူ နောက်လိုက် တပည့်များ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဖရန်းစစ်နှင့် တပည့်များ သည် ဖိနပ်မပါ၊ ငွေမကိုင်ဆောင်ဘဲ၊ အီတလီပြည်အလယ်ပိုင်း တွင်လှည့်လည်၍ သာသနာပြုတရားဟောကြ၏။ ဖရန်းစစ် တွင် တပည့် ၁၂ ယောက်ရသောအခါ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဖရန်စစ္စကန်ဂိုဏ်းကို တည်ထောင် လိုက် လေသည်။
ဖရန်စစ္စကန်ဘုန်းကြီးများသည် ကိုယ်ကျင့်သီလစင်ကြယ် ရမည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာမစုဆောင်းရ၊ ခြိုးခြံစွာ စားသောက်နေထိုင် ကြရသည်။ ဆင်းရဲသားများကို ကူညီစောင့်ရှောက်ရသည်။ ဤ ကဲ့သို့ မွန်မြတ်သော တရားကို ကျင့်သုံးသဖြင့် နောင်တွင် ဖရန်းစစ်၏ တရားကို ယုံကြည်နှစ်သက်သော မိန်းမများပင် တပည့်ခံရန်ရောက်လာကြ၏။ ထို့ကြောင့် ၁၂၁၂ ခုနှစ်တွင်၊ ဖရန်စစ္စကန်သီလရှင် ဂိုဏ်းဟူ၍ ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် ဖရန်စစ္စကန် လူဝတ်ကြောင်ဂိုဏ်းများလည်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့ လေသည်။
ဖရန်းစစ်ကား မိမိ၏ ဝါဒကို လိုက်လံဟောပြောရာ၌ စပိန်ပြည် အစ္စလမ်အယူဝါဒီ မူးဝါးလူမျိုးတို့ နေထိုင်သော နေရာများသို့ပင်အသက်စွန့်ပြီး သွားရောက်ခဲ့လေသည်။ လူများ စွာက ချစ်ခင်ကြည်ညို၍ သူ၏သီလတန်ခိုး မေတ္တာတန်ခိုး ကြောင့် အံ့ဖွယ်သရဲများကိုပင် ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်လာ ကြ၏။
လူတို့အပေါ်တွင် လူတန်းစားမရွေး၊ လူမျိုးမရွေး၊ မေတ္တာ တရားတစ်မျိုးတည်းထားကာ၊ ကျင့်သုံးနေထိုင်ခဲ့၏။ သူ၏ မေတ္တာတရားကြောင့် ကျေးငှက်များသည် ဖရန်းစစ်အားကြောက် ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ၊ အနားသို့ချည်းကပ်လျက် တရားနာယူကြသည်ဟူ ၍ပင် ဆိုစမှတ်ပြုကြသည်။
ဖရန်းစစ်သည် ကွယ်လွန်သောအခါ၊ ခရစ်တော် ယေရှု လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ တင်၍ အသတ်ခံရစဉ်က၊ ရရှိသောဒဏ်ရာ ငါးချက်အတိုင်း၊ သူ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်ဟုဆိုသည်။ ဖရန်းစစ်ကို ခရစ်တော်ကဲ့သို့ မွန်မြတ်သော အကျင့်ရှိ၍၊ နူးညံ့ သိမ်မွေ့သူ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးဟု ယုံမှတ်လျက်ရှိကြသည်။ ၁၂၂၆ ခုနှစ် အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ်တွင် အနိစ္စရောက်ပြီးနောက် နှစ်နှစ်ခန့် အကြာတွင် ဖရန်းစစ်အားသူတော်စင်တစ်ပါးအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုကြလေသည်။
Afrikaans: Franciskus van Assisi
Alemannisch: Franz von Assisi
aragonés: Sant Francisco d'Asís
العربية: فرنسيس الأسيزي
مصرى: فرنسيس الأسيزى
asturianu: Franciscu d'Asís
Aymar aru: Francesco d'Assisi
azərbaycanca: Assizli Fransisk
Boarisch: Franz vo Assisi
žemaitėška: Šv. Prancėškos Asīžėitis
беларуская: Францыск Асізскі
беларуская (тарашкевіца)‎: Францішак з Асізі
български: Франциск от Асизи
Bislama: Francesco d'Assisi
brezhoneg: FrañsezaAsiz
bosanski: Franjo Asiški
català: Francesc d'Assís
کوردی: فڕانسیس ئاسیزی
čeština: František z Assisi
kaszëbsczi: Swiãti Francëszk z Asëżu
Cymraeg: Ffransis o Assisi
dansk: Frans af Assisi
Deutsch: Franz von Assisi
Ελληνικά: Φραγκίσκος της Ασίζης
English: Francis of Assisi
Esperanto: Sankta Francisko el Asizo
español: Francisco de Asís
eesti: Franciscus Assisist
euskara: Frantzisko Asiskoa
فارسی: فرانسیس آسیزی
suomi: Franciscus Assisilainen
Võro: Assisi Franciscus
français: François d'Assise
Frysk: Fransiskus fan Assisy
Gaeilge: San Proinsias Assisi
galego: Francisco de Asís
Avañe'ẽ: Francisco de Asís
עברית: פרנציסקוס מאסיזי
hrvatski: Sveti Franjo Asiški
magyar: Assisi Szent Ferenc
հայերեն: Ֆրանցիսկ Ասսիզեցի
Bahasa Indonesia: Fransiskus dari Assisi
Ido: Santa Franciscus de Assisi
íslenska: Frans frá Assisí
italiano: Francesco d'Assisi
Basa Jawa: Fransiskus saking Asisi
ქართული: ფრანცისკე ასიზელი
Kabɩyɛ: François Assise tʋ
한국어: 아시시의 프란치스코
Latina: Franciscus Assisiensis
Ligure: San Françesco
lumbaart: San Francesch d'Assisi
lietuvių: Šv. Pranciškus Asyžietis
latviešu: Asīzes Francisks
Malagasy: François d'Assise
മലയാളം: അസ്സീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസ്
Malti: San Franġisk t'Assisi
Mirandés: Fracisco de Assis
Nāhuatl: Francesco d'Assisi
Nederlands: Franciscus van Assisi
norsk nynorsk: Frans av Assisi
norsk: Frans av Assisi
Nouormand: Françouais d'Assise
occitan: Francés d'Assisi
Kapampangan: Francisco de Asis
polski: Franciszek z Asyżu
português: Francisco de Assis
Runa Simi: Francesco d'Assisi
română: Francisc de Assisi
русский: Франциск Ассизский
sardu: Frantziscu de Assisi
sicilianu: San Franciscu d'Assisi
Scots: Francis o Assisi
srpskohrvatski / српскохрватски: Franjo Asiški
Simple English: Francis of Assisi
slovenčina: František z Assisi
slovenščina: Frančišek Asiški
shqip: Françesku i Asizit
српски / srpski: Фрањо Асишки
svenska: Franciskus av Assisi
Kiswahili: Fransisko wa Asizi
தமிழ்: அசிசியின் பிரான்சிசு
Tagalog: Francisco ng Asisi
Türkçe: Assisili Francesco
українська: Франциск Ассізький
اردو: فرانسس آسیزی
vèneto: San Francesco de Sisa
Tiếng Việt: Phanxicô thành Assisi
Winaray: Francisco han Assisi